Ubax iyo qosol, fuulitaanka jidka oo dhan | Zhenji
———Tartanka guuritaanka 6-aad ee shaqaalaha
Tartanka sanadlaha ah ee buurta shaqaalaha ee madaxweynaha Kkkoman zhenji cuntooyinka co, ltd. waxaa lagu qabtay May 11,2019 buur fenglong ah sidii loo qorsheeyay. Ku dhawaad ​​400 oo shaqaale ah iyo xubnahooda qoyska dhow ayaa ka qeybgalay tartan sanadle ah.
Bilaabashada rasmiga ah ee ciyaarta 8:30, si ay uga qeybgalaan sanadkan tartamada shaqaalaha fuulista oo ay weheliyaan maareeye, kuxige guud agaasime, maamuleyaal shirkadeed, waa shaqaale xafiis kasta oo maareyn, waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan sida iibka, shaqaalaha wax soo saarka, inbadan oo ka mid ah shaqaalaha. kooxda xiriirka ee ninka iyo naagta, aabaha iyo wiilka (dhediga), hooyada iyo gabadha (wiil) faylka, iyo qoys sedex ah, iyadoo aan loo eegin jinsiga, da'da, qof walbaa wuxuu la kulmaa farxad, kalgacal.
Xilliga xagaaga hore, geedaha pagoda ee buurta fenglong waxay ku jiraan ubax buuxa, iyo dariiqa dhagaxa ee loo maro hooska geedaha waxaa ka buuxa geedo. Markay dabayluhu afuufayso, waxaa jiri doona ubax fiican oo soo dhacaya. Qorraxda, cadarka ubaxyada, heesaha shimbiraha iyo biyaha ilmada ayaa dhammaantood dadka ka dhiga nasasho iyo farax.
Noqo dabiicadda oo ku raaxee muuqaalka quruxda badan. Si aad ula socoto kuwa aad jeceshahay, si aad ugu raaxaysato diiranaanta kalgacalka, Wadajir asxaabtaada, khibrada u leh fahamka kooxda; Noqo naftaada oo aad dareento farxadda iyo horumarka jirkaaga iyo maskaxdaada. tartanka, 15 guuleystayaal ayaa la xushay.
Is dhexgalka dabiicadda, isboortiga jecel, u doodidda caafimaadka iyo abuurista niyad wanaag kooxeed ayaa ah ujeedooyinka ugu waaweyn ee nashaadaadyada ka dhaca banaanka oo ay qabanqaabiso shirkaddu. Maahan oo keliya in la tayeeyo oo la hanto rabitaanka, waa mid ka mid ah nashaadaadka shaqaalaha aad loo jecel yahay. ka dib, markaa aan sugno nashaadaad xiisa badan oo banaanka ah sanadka soo socda.